Ra’isulwasaare ku xigeenka oo dalka ku soo laabtay – Radio Muqdisho
Ra’isulwasaare ku xigeenka oo dalka ku soo laabtay
Ra’iisal wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte oo safar shaqo oo mudo qaatay ugu maqnaa dalalka Kenya iyo Switzerland oo uga qayb galay shirar kala duwan ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay isagoo si weyn garoonka diyaaraha ay ugu soo dhaweyeen xubno katirsan labadda gole ee dowladda iyo mas’uuliyiin kale.
Mudane Maxamed Cumar Carte ayaa dalka Kenya kaga qayb galay shir looga hadlay dardargelinta taageerada dowladda Soomaaliya ay ka hesho caalamka iyo barnaamijka New Dealka halka magaladda Geneva dalka Switzserland uu uga qayb galay shirka 104 aad shaqaalaha aduunka kaas oo looga hadlayey horumarinta shaqaalaha aduunka.
Ra’iisal wasaare ku xigeenka oo warbaahinta qaranka kula hadlay qaybta Nasashaqada garoonka dayuurahadaha ayaa sheegay in Soomaaliya shirkaasi ay ka dalbatay in loo ogalaado in ay dib u hesho xubinimada ururka shaqalaha aaduunka.
“Waxaana shirkii magaalada Nairobi kula qaatay deeq bixiyaasha shirkaasi oo looga hadlayey daradargalinta deeqda dowladda Soomaaliya la siiyo iyo horumarka dalka Soomaaliya ka socda,Geneva waxaan kaga qaybgalnay Shirka calamiga ahaa 104 aad shaqaale weynaha aduunka , halkaasi oo an ka sheekaynay waxyabihii I noo qabsoomay”, ayuu yiri Ra’iisal wasare ku xigeenka.
Mudan Maxamed Cumar Carte Qaalib ku xigeenka Ra’iisal wasaraha dalka ayaa sidoo kale intii uu ku sugnaa magalaada Geneva waxaa uu kulamo kale duwan la qaatay qaar kamid ah madaxdii ka qayb gashay shirka shaqaalaha aduunka iyo mas’uuliyiinta Ururka Shaqaalaha Adduunka isagoo kale hadlay sidii Soomaaliya looga caawin lahaa sidii shaqo abuurka oo kale.
500 oo dad danyar ah oo loo qeybiyay lacag ay ku afuraan-Sawirro